Soomaaliya iyo Jabuuti Oo Ka Wada Hadlay Horumarinta Isgaarsiinta.
Wasiirka Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknolojoyadda dalka Soomaaliya Eng. Cabdi Cashur Xasan oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ayaa sheegay dalka Soomaaliya in uu yahay hada mid ka soo kabanaya bur bur, loona baahan yahay in laga garab istaago dhan walba.
Wuxuu sheegay masuuliyiinta Jabuuti gaar ahaan Wasaaradda Boostada dalkaasi in uu kala hadlay arrimaha xiriirka Iskaashiga ee dhinaca hergelinta Heshiiska Boostada Jabuuti “La Poste de Djibouti” iyo iskaashiga dhinaca horumarinta Isgaarsiinta.
Eng. Cabdi Cashur Wasiirka Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknolojoyadda dalka Soomaaliya ayaa sheegay weli in ay maqantay taageerada Caalamka, ilaa taasi laga gaarayana ay caawimaad ka heli doonaan Jabuuti.
Sidoo kale Xubanaha wafdiga Wasiir Cashur ayaa waxa ay kormeer ku tageen Xarumaha Shirkada Djibouti Telecom iyo shaldhiga xargaha fiber optic-ga dalka Jabuuti, kaasi oo Soomaaliya ay baahi weyn u qabto.